Gastronomy of Austria, lovia mahazatra | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Aotrisy, gastronomy, General
Androany dia hivezivezy any an-tsaintsika isika amin'ny gastronomia Austrianianina malaza. Io karazan-tsakafo io dia misy akony maro, toy ny nahandro jiosy, hongroà na tseky. Izy io dia sakafo izay ekena amin'ny lovia lehibe ao aminy, miaraka amin'ny hena manankarena ary koa ho an'ny mofomamy.
Handeha isika fantaro ny sasany amin'ireo lovia mahazatra an'ny nahandro Austrian, karazan-tsakafo iray izay manome lovia mamy feno tsiro. Tsara ny fahafantarana ny gastr gastrikan'ny toerana tsidihinay satria ao anatin'ny kolontsaina sy ny tantaran'izy ireo ihany koa io.
1 paoma strudel
3 Hen'omby nandrahoina
4 Saosisy Viennese
Azo antoka fa efa mahazatra anao io anarana io, ary izany dia ity paoma paoma ity koa dia lovia mahazatra any atsimon'i Alemana. Momba ny a koba matevina tena manify izay mofomamy kely indraindray. Ao anatiny no ahitantsika paoma, siramamy, kanelina, voaloboka ary mofo mofomamy. Fahita koa ny manampy voanjo sasany mba hanomezana azy tsiro bebe kokoa. Atao ao anaty lafaoro izy io ary matetika ampiarahina amin'ny siramamy amam-bolo ary indraindray ampiarahina crème mamy misy hanitra lavanila. Raha fintinina, tsindrin-tsakafo tsy maintsy andramanao ary azo antoka fa tianay.
Este steak style vienna manana fitaomana arabo angamba. Voalaza fa ny arabo dia nitondra ny recette tany Espana ary avy eo tany Italia ary tonga teto ihany. Androany dia iray amin'ireo lovia tsy maintsy andramana amin'ny sakafo Austrianianina. Vonona miaraka amina henan'omby voadidy ho silaka manify izy io, satria tsy maintsy ampianao ilay feta. Arotsaka ao anaty lafarinina, atody nokapohina ary sombin-mofo izany. Hevitra iray izay mifanandrify amin'ny Espaniôla Milanianina fantatsika be loatra, ka ity lovia ity dia mety ho mahazatra sy matsiro miaraka amin'izay. Na izany aza, amin'ny sakafo Austrianina dia endasina amin'ny dibera matetika fa tsy amin'ny menaka oliva. Mikasika ny fomba fanolorana azy io, dia matetika no ampiany ny paty frantsay na salady ho iray.
Ity lovia ity dia vita amin'ny Hen'omby fomba Viennese. Ity hena ity dia andrahoina amin'ny ron-kena na rano manome tsiro iray azy. Rehefa masaka dia tapatapahina ho tapatapaka ary aroso. Matetika izy io dia ampiarahina amin'ny ovy nopotsehina sy compotes na saosy sasany alaina amin'ilay hena. Amin'ny ankapobeny dia lovia tokana sy tena nentim-paharazana izay mendrika ny andrana, indrindra raha mpitia hena ianao.
Tsy mety tsy hita ao amin'ny Sakafo aostraliana ny saosisy Viennese malaza. Marina tokoa fa ny hena dia mitana andraikitra lehibe amin'ny gastr gastrie, ka ity lovia ity dia sakafo iray hafa izay tsy tokony hadinointsika. Ampangotrahina henan'omby na henan-kisoa izy ireo avy eo dia afohana. Farany dia aroso amin'ny fomba isan-karazany izy ireo, na dia azo hanina amin'ny mofo fotsiny aza. Tena hahita trano fisakafoanana maro isika izay hihinanana saosisy Viennese tena izy.
Ity lovia ity dia manana azy fitaomana any Eoropa Atsinanana ary fantatra amin'ny toerana toa an'i Hongria izy io. Izy io dia lovia heverina ho manetriketrika, saingy ankehitriny dia ampahan'ny kolontsain'ity firenena ity izy io ka noho izany dia hitantsika amin'ny trano fisakafoanana maro izy io ary andramo izany. Izy io dia hena nandrahoina izay mora ny fanomanana azy. Ny salady ovy sy persily dia matetika ampiana. Lovia tsotra fa iray izay tokony hosedraina sy hankafizintsika tokoa.
Ity takelaka ity misy henan-kena izay masaka anaty rano masira. Tsy mitovy ny henan'omby amin'ny faritra rehetra eto an-tany fa foto-tsakafon'ny sakafo aostraliana izy ireo. Izy ireo dia azo vita amin'ny ovy, mofo na lafarinina na hena, izay mitovy be amin'ity tranga ity amin'ny hena hena izay hita saika manerana an'izao tontolo izao. Saingy any Austria dia afaka manana akora samihafa izy ireo.
ny ireo antsoina hoe cookies dia mahazatra ny vanim-potoanan'ny krismasy. Isika rehetra dia efa nahita ireo karazana cookies miendrika endrika hafa amin'ny toerana hafa, satria nanjary malaza be izy ireo. Matetika ny fomba fahandro dia miovaova isaky ny trano iray, na dia ny mazava aza dia momba ny mofomamy mamy vita amin'ny koba fohy izay aparitaka ary avy eo nendahina fitaovana tsy mitovy endrika. Ny sôkôla na voankazo maina dia azo ampiana aminy. Na izany aza, raha mitsidika an'i Austria ianao mandritra ny Krismasy dia ho hitanao fa mahazatra ireto cookies ireto.
La Ny mofomamy sacher dia efa mahazatra mofomamy amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao, iray amin'ireo vatomamy izay matsiro tokoa ka niampita sisintany. Izy io dia mofomamy sôkôla izay vita amin'ny sôkôla sy mofomamy spaonjy dibera roa izay sarahina amam-paiso apricot. Ny mofomamy iray manontolo dia rakotra fanala sokola mainty izay manome azy io endrika matsiro io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Aotrisy » Gastronomy of Austria: lovia mahazatra